Wasaarada Maaliyada Somaliland Oo Golaha Wakiilada Horkeentey Miisaaniyad Sannadeedka 2020 | Radio Hormuud
Hargeysa(RH)Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Maaliyada Somaliland Sacad Cali Shire, ayaa xildhibaanadda golaha Wakiiladda faahfaahin ka siiyay miisaaniyad-sanadeedka 2020-ka, oo golaha la horgeeyay.
Waxaana fadhigaasi golaha mudenayaasha golaha Wakiiladda loo qaybiyay odoroska miisaaniyadda 2020-ka si ay u soo naaqishanaan.
Dhinaca kale miisaaniiniyad-sannadeedka 2020-ka ee golaha Wakiiladda la horgeeyay ayaa cadadkeedu dhan yahay 2,751,304,880,098 (Laba Tiriliyan, Toddoba boqol kow iyo konton Bilyan, daddex boqol iyo afar milyan, siddeed boqol iyo siddeetan kun iyo siddeed iyo sagaashan shilin), waxana ay 18% (Boqolkiiba siddeed iyo toban) ka badan tahay miisaaniyad-sannadeedkii 2019-ka.
Sidoo kale xildhibaanadda ayaa su’aalo ka waydiiyay wasiirka miisaaniyadda 2020-ka isagoo mid mid uga jawaabay su’aalahaasi.
Mashaariicda bangiga aduunka ee ina soo mara shan iyo afartan milyan sideed boqol iyo shan milyan iyo todoba boqol oo kun, mashaariicda JPG iyaguna waa shan iyo toban bilyan sagaal iyo sagaal iyo afartan milyan saddex boqol iyo toba iyo lixdan milyan weeye.
Isugeyn miisaaniyadda Qaranka ee 2020-ku waxaa weeyi waa laba tiriliyan laba boqol iyo kob iyo konton bilyan, saddex boqol iyo afar milyan, sideed boqol iyo siddeetan kun iyo siddeed iyo sagaashan taasi oo ka badan tii kal hore boqolkiiba sideed iyo toban”.
Waxa kaloo aanu dooneyna in dadkeena wax-soo-saara ee warshadaha ama beeraha wax ka soo saara aynu cashuurta ku ilaalino, dadkeena Beeraleyda ah xiliyada ay wax u soo go’aan ayaa waxyaabo badan oo jabani dibadda inagaga yimaadaan deetana waa ay ku khasaaraan, marka tartana ku dhiiran maayaan oo markale in ay beertii beeraan ku dhiiran maayaan.
Wasiirka ayaa iftiimiyey in miisaaniyadu sanadka waxaa awooda lagu saarayo. “Amniga, waxbarashada, caafimadka, wax-soo-saarka, doorashooyinka, kaabayaasha dhaqaalaha iyo shaqo abuurka dhalinyarada” ayuu yidhi wasiirka maaliyadu.